Global Voices teny Espaniola Mpitsara fifaninanana fanaovan-gazety Bottup · Global Voices teny Malagasy
Global Voices teny Espaniola Mpitsara fifaninanana fanaovan-gazety Bottup
Voadika ny 02 Marsa 2010 8:11 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, বাংলা, Español, English
Manaiky ny fisoratana handray anjara amin'ny fifaninanana fanaovan-gazety andiany faharoa hatramin'ny faha-15 marsa ho avy izao ny vohikalam-panaovan-gazety Espaniola Bottup. Hotondroina ho “Solontena manokan'” ny Bottup ary homena loka fandehanana maimai-poana any amin'izay toerana rehetra tiany hanaovana fanadihadiana (€1800 farafahabeny) izay mandresy amin'izany.
Tafiditra ho anisan'ny mpitsara hifantina izay homena ny loka amin'izany ny tonian'ny Global Voices teny Espaniola, Juan Arellano avy any Però.
Afa-mandray anjara amin'izany avokoa ny avy amin'ny firenena miteny espaniola rehetra. Misoratra anarana ho olo-tsotra manao gazety miaraka amin'ny Bottup fotsiny ianao dia mametraka vaovao (tantaraina) amin'ny endrika rehetra tianao ampitàna azy(lahatsoratra, lahatsary, sary, sns).
Hanitsy ny tantara ny ekipan'ny Bottup raha misy ny lafiny tsy maintsy hanaovana izany (”fanamarinana, fanamarihana, fanitsiana ary fampivelarana”) ary hamoaka izany ho hitan'ny besinimaro. Izay tantara rehetra tafavoaka ao amin'ny Bottup mialoha ny 15 Marsa 2010 no mandray anjara ho azy ao amin'ny fifaninanana.
Azonao jerena manontolo ato ny andinindininy rehetra momba izany (teny Espaniola).
Zava-tsy rariny ve no tiana hotantaraina? Sa famintinana momba ny sarimihetsika nojerenao farany? … Ny tanjon'ny fifaninanana hanaovan'olo-tsotra gazety dia ny hampiroborobo endrika famoahan-javamisy vaovao izay miainga avy eny anivon'ny sarambambe, vokarin'olo-tsotra ary iasan'ny mpanao gazety matihanina amin'izany.
Tamin'ny andiany voalohany [ES] tamin'ity fifaninanana fanaovan-gazety avy amin'olo-tsotra Bottup ity tamin'ny 2008 moa dia telo no nahazo ny loka [ES] tamin'ireo sokajy samihafa, nofantenina avy tamin'ny mpandray anjara miisa 214.
Nahazo ny loka tamin'izany i Ágata Mata Bermúdez avy any Málaga izay namoaka lahatsoratra “La Iglesia: comunión y celíacos“. Nahazo loka ihany koa ny tantara “Adoptar millones de sonrisas“ nosoratan'i Eduardo Marin Raboso. Ary ny Farany nahazo loka dia i Olga Pardo Ayuso noho ny tantara hoe “Alimentar a los coches o alimentar a las personas“.
Tantaran'ny Espaina farany
06 Mey 2021Fanoherana
Miatrika fifanenjanana amin'ny fahatongavan'ny mpifindramonina ny Nosy Canary
23 Marsa 2021Mediam-bahoaka